Umzila weFerro eAndorra | Izindaba Zokuhamba
Umzila weFerro e-Andorra
Maria | | Izindlela zokuphunyuka, General, Ukuhamba nezingane
Isithombe | Ukuphunyuka emaphandleni
Enye yemizila elula yokuqalisa izingane ezintabeni yiRuta del Ferro e-Andorra. Itholakala kalula ukuthi inganconywa kunoma ngubani ngaphandle kokubheka ubudala noma isimo somzimba.
Igama lalo mzila lisho ukubaluleka kokuhweba ngensimbi kwePrincity of Andorra, ngokujwayelekile, kanye nesifunda sase-Ordino, ikakhulukazi, phakathi nekhulu leshumi nesikhombisa neshumi nesishiyagalolunye. Ngakho-ke, kungumzila oveza isisindo somsebenzi wensimbi kule ndawo kanye namathafa amahle aseAndorran.
1 Umzila weFerro
2 Umzila weRal Path
3 Amathiphu wokwenza iFerro Route
Uhambo lwe-Andorra empeleni luyindlela yamasiko nemvelo efinyelela kwezinye izindawo ePyrenees, njengeCatalonia, i-Aquitaine, i-Ariège, iVizcaya neGuipúzcoa. Ngenxa yentshisekelo yayo, neqiniso lokuthi ilungele zonke izethameli kanye nokusebenzisana phakathi kwamazwe, ngo-2004 iRuta del Ferro yathola igama elihloniphekile loMkhandlu WaseYurophu.
Umzila weRal Path
Ukuze nenze iFerro Route njengomndeni, siphakamisa umzila weRal Path, phakathi kwamadolobha aseLa Cortinada naseLlorts, okwenziwa kalula, ngokungalingani nakancane nokujabulela okuthile okumnandiukubukwa kwesiteji.
IFerro Route iqala eduze kwendawo yokupaka izimoto iLlorts Mine, lapho kungapakwa khona izimoto. Zombili indlela ezokwehla esizozihambisa eLa Cortinada nemayini ziseduze nendawo yokupaka izimoto.
Le mayini yake yasebenza kakhulu kubahlali bakulezi zindawo ezisentabeni. Ehlobo, izivakashi zinikezwa ithuba lokuthatha uhambo oluqondisiwe ngaphakathi emayini kanye nokuthola umbukiso waphakade wezithombe zanamuhla ezibizwa ngeCamino de los Trajinantes kanye nethuba lokuhamba indlela ye-Iron Men.
Ngokuhambisana nezimayini zeSedomet neRansol, iMayini iLlorts yondla amafolishi akule ndawo, yize eyokugcina ibisebenza iminyaka emine kuphela ngenxa yenani elincane lensimbi elitholakala ngaphakathi.
Ukuthatha indlela ephambi kwemayini sizothola amaphuzu ahlukene amakwe izinombolo akhombisa izindawo ezithakazelisayo ohambweni.
Iphuzu 1: Yidwala le-metamorphic ebelisetshenziswa ngokwesiko ukwakha uphahla lwezindlu e-Andorra.
Iphuzu 2: Kungumthombo wemvelo onenani elikhulu lensimbi ngaphansi kwawo.
Iphuzu lesithathu: Sibhekene nendawo enomswakama kakhulu lapho ubulembu nezinye izitshalo ezincane zigcwele khona.
Iphuzu 4: Ngakwesobunxele indlela eholela eBordas de Ensegur. Ezinsukwini zakudala, abantu abavela ezigodini babekhuphuka lapha ehlobo nezinkomo zabo ukudlulisa isizini. Kuyisiza esinezindawo eziningi zokuhlala nezindawo zotshani. Ngaphezu kwalokho, esihosheni sase-Ensegur ungazijwayeza ukuhlehlisa.
Iphuzu 5: Ukusuka lapha ungacwaninga kahle uhlaza lwendawo
Iphoyinti 6: itholakala buqamama ezansi, lapho indlela ivikeleke ngezindonga zamatshe ezibizwa ngokuthi izindonga zamatshe ezomile ezazisebenza ukuvimbela ukungena kwezinkomo lapho zigqamuka.
Iphuzu 7: Sithola iLes Moles Bridge, isiphambano esiphakathi komgwaqo iTal nalesi esiya eLlorts. Ngemuva kokuhamba amamitha ambalwa sizobona idlelo elinemifanekiso ebunjiwe engaphandle eyi-7 ye-Iron Men ngumculi waseFrance uRachid Khimoune.
Iphuzu 8: Umzila wesitimela uyaqhubeka ukwehla futhi ngakwesokudla yiPuente del Vilaró, eduze nendawo yokuphumula. Ngokushesha ngemuva kwalokho, umgwaqo udlula ngesibhamu nangasesikhungweni iVilaró, lapho insimbi yatholakala ngokunciphisa ngqo amaminerali akhishwe ezimayini.
Iphuzu 9: Ngemuva kwaleli phuzu, siyaqhubeka nokwehla kwesigodi phakathi kwezimfunda ezinkulu futhi sishiya izindlela ezahlukahlukene ngakwesobunxele ezikhuphukela esigodini sase-Ensegur. Sesiyazibona izindlu zase-Arans ngemuva ngakwesokudla. Uma siqhubeka nokuhamba sifika ebhulohweni lase-Arans.
Iphuzu 10: Njengoba sisondela eLa Cortinada, umfula iValira del Nord uya usondela futhi usondela. Kule ndawo, amanzi anombala obomvu ngenxa yenqwaba yensimbi yenhlabathi ayihambayo. Silandela indlela edlula esigayweni iMas de Soler, sesifikile eLa Cortinada.
Lapho sinqamula ibhuloho eliholela kwelinye ibhange loMfula, sifika endaweni yokusaha izingodo yeCal Pal, okuyizakhiwo ezimbili ezisukela ngekhulu le-XNUMX nele-XNUMX. IHhovisi Lezokuvakasha linikeza izinkambo eziqondiswayo ehlobo.
Iphuzu 11: Lapho siwela umgwaqo sihlangabezana nolunye lwezimpawu ze-Ordino Valley ngenxa yengcebo yalo yobuciko namasiko: isonto laseSant Martí de La Cortinada (1: 00h - 1.330m). Lesi sakhiwo sixhumene noMzila Wensimbi ngoba imigoqo ye-altare elikhulu kanye namasonto asemaceleni enziwe ngensimbi evela endaweni.
Ekubuyiseni, kufanele uhlehlise yonke indlela futhi cishe ehoreni uzobe usubuyile eMayini iLlorts.
Amathiphu wokwenza iFerro Route
Landa insiza yezokuphepha evumela abagibeli bezintaba ukuthi bathumele indawo yabo ngqo ukuhlenga amaqembu esimweni esiphuthumayo.
Hlonipha imvelo: jabulela indawo yasemaphandleni bese uyishiya njengoba wayithola.
Phuza amanani amancane njalo. Isilinganiso samanzi ukugcina wonke umzila.
Uma ufinyelela isigaba osibona siyingozi noma esingaphezu kwamandla akho, kungcono ujike.
Hlola isimo sezulu sendawo, usuku nezikhathi zokuhamba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Umzila weFerro e-Andorra
Yini ongayibona ePolignano a Mare